မောင် (MG ) ပြက္ခတိန် လက်ကျန်103 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Myanmar Gazette » မောင် (MG ) ပြက္ခတိန် လက်ကျန်103	22
မောင် (MG ) ပြက္ခတိန် လက်ကျန်103
Posted by Novy on Dec 2, 2015 in Myanmar Gazette | 22 comments
ပြက္ခတိန် လက်ကျန်နှင့် ၇၇ှိငွေ ( ၀၂ – ၁၂-၂၀၀၅)
အန်တီမမ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = ယူပြီ
ဦးကျောက် – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = မယူသေး
KZ – ၅၀. (၃ လ စာ နဲ့ ကာဗာ) = ယူပြီ ၁ခုလို (ကိုမတ်)
မသဲ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)= ယူပြီ
မနိုဗီ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = ယူပြီ
သူကြီး – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = ယူပြီ (အန်တီမမ)
အန်တီဒုံ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)= ယူပြီ (အန်တီမမ)
Mလုလင် – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = ယူပြီ
ဦးမိုက် – ၂၀ ခု (၂ လ စာ) = ယူပြီ
အကြံညာဏ် အစဖော်သူ – အလင်းဆက် = မယူသေး
ဒီဇိုင်းနာ – မိုးသူ = မယူသေး
၁) ကိုပေါက် (မန္တလေး) = မယူသေး
၂) ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် = မယူသေး
၃) ကိုမျိုး (ဖောဂိုင်း) = မယူသေး
၄) မဝေ = မယူသေး
၅) ကိုစိန်သော့ = မယူသေး
၆) ပု(ချ) = မယူသေး
တဂျီး – ၅ ခု = ယူပြီ (အန်တီမမ)
ကျောက်(စ) – ၅ ခု = မယူသေး
ကေဇီ – ၅ ခု = မယူသေး
တောတွင်းပျော် – ၅ ခု = မယူသေး
အန်တီဒုံ – ၁ ခု = ယူပြီ (အန်တီမမ)
စွယ်တော်ရွက် – ၂ ခု = ယူပြီး ( သကြား)
စောရိုး – ၅ ခု = ယူပြီး (သကြား)
ဘဖော – ၅ ခု = မယူသေး
မွအိ ၃ ခု = မယူသေး
ကိုထူးဆန်း ၅ ခု= မယူသေး
အရောင်းစာရင်း = ၅၅
တုံတုံ ၅ခု = ၁၂၅၀၀
ဦးမိုက် ၁၀ခု =၂၅၀၀၀
အန်တီမမ ၄ခု = ၁၀၀၀၀
ဦးစွယ်တော် ၁၀ခု = မရသေး
အန်ကယ်ကြီး ၁၀ခု = မဝေ
ကိုလှမိုး ၅ခု = ၁၂၅၀၀
ေ ကောင်းကင်ပြာ ၁၀ခု = ၂၅၀၀၀
ချာတူး ၁ခု = ၂၅၀၀
ဦးမိုက် (ကြော်ငြာဖိုး) = ၈၀၀၀၀
Mလုလင် (ကြော်ငြာဖိုး) = ၄၀၀၀၀
မောင်ဂီ = ၁၇၀၀၀၀
မနိုစိုက်ငွေ (၁၄ ၅၀၀)
ကြော်ငြာရှင် = (၁၂၉)
အလှူရှင် = (၁၃)
အရောင်းစာရင်း = (၅၅)
လက်ကျန် = ၁၀၃
ဦးပါ ၁၀ခု = ၉၃ခု
Novy says: ပြက္ခတိန်များကျန်ရှိနေပါသေးတယ် မရရှိသေးသူများလာရောက်က်ဝယ်ယူနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားပါတယ်၇ှင်
ရွှေတိုက်စိုး says: စမီးဒို. မန်းလေးသူား တွေကျတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလို.. လိုလဲလိုချင် မှာရမှာလဲ ကြောက် မရမှာလဲစိုး မ၀ယ်ဘဲလဲမနေနိုင် လျစ်လျှူလဲ မပြုရက် မရလိုက်မှာလဲ မလိုလား …. အိုရှုပ်ပါတယ်.. မှာမယ်အေ..
ပိုက်ဆံကို မိုးဘိုင်းဘန်းကီးနဲ.လား.. ထုတ်တိုင်း အော့လိုင်ဖစ်ဖစ်နေတဲ့ အမ်ပီးယူးနဲ.လား.. ခရက်ဒစ်ကပ်နဲ.လား.. ဘိုပေးချေရမှာလဲ.ပြောအုံး..
Novy says: စမီးဒို. မန်းလေးသူား တွေ ဘယ်နှစ်ခုလောက်ယူမလဲအရင်စုလိုက် ပြီးရင် လူကြုံမရှိရင် ကား၈ီတ်နဲ့ပို့ပေးမယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘဖော ၅ ခု နဲ့
ကိုထူးဆန်း ၅ ခု က ထည့်ရောင်းလို့ရပါကြောင်း
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကေဇီ – ၁ ခု လို (၄၉ ယူပြီး)
ပု(ချ) – ၁ ခု
ကိုကျောက် – ၁၀ ခု
Novy says: ကေဇီ – ၁ ခု လို (၄၉ ယူပြီး)ကို
လက်ကျန် = ၉၁
KZ – ၅၀. (၃ လ စာ နဲ့ ကာဗာ) ၁ခုလို + ကဇီ – ၅ ခု + တာတွင်းပျော် – ၅ ခု + အလင်းဆက် ၁ခု = ၁၂ ခု အား အလင်းဆက်မှ ယူဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ အလိုတစ်ခုကို ပေးလိုက်လို့သာ ထည့်ယူလာမိတာ ဘယ် ပေးရမှန်းမသိလို့ လက်ထဲ ဒီအတိုင်း—
ကိုတောပျော် ငါးခုကို ဆိုင်သူလက်ထဲ ထည့်ပေးပြီးးးဖြစ်ကြောင်းးးး
မခိုင်ဇာ ငါးခုကို လေးခုအား ကတောပျော်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ကြောင်းးး
ကျန်တစ်ခုကို အောင်မိုးသူကို ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းးးး
ကျနော့်လက်ထဲ ကျနော့်အတွက် တစ်ခုသာ ချန်ထားပါကြောင်းးး
အာ့တောင် ဘယ်နားထောင်ရမယ်မသိလို့ အိတ်ထဲ ဒီအတိုင်းးးး
ムラカミ says: ၀ယ်​ဂျလကွာ
၂​စောင်​က ​ကျောဘက်​ နှစ်​ဖက်​ နံရံမှာကပ်​ဖို့
၁​စောင်​ က စာကျိစားပွဲ​ပေါ်တင်​ဖို့
​နောက်​ဆုံးတ​စောင်​က ကျိမရဆုံးသူ ​တျောက်​​ယောက်​ကို လက်​​ချောင်​​ပေးဖို့
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော် နဲ့ ကိုမျိုးအတွက်ကို ရွှေတိုက်စိုး အတွက်ပို့ရင်ထည့်ပို့ပေးစေလိုပါကြောင်း
Novy says: မန်းလေးကို ၂၅ရက်နေ့ရောက်ပါ့မယ် ၂၆ရက်နေ့ စစ်ကိုင်းမှာ မနိုကိုယ်တိုင် ပြက္ခတိန်ရောင်းပါ့မယ်
လာယူသူ၊ လာဝယ်သူများအား မနက်ပိုင်းလာပါက မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်လည်းကောင်း နေ့ခင်းပိုင်းလာပါက နတ်သုတ်ဒါ ဒံပေါက်ဖြင့် ဧည့်ခံပါမယ်ရှင် လိုချင်သော အခုအခုအရည်အတွက်ကို စာရင်းပေးကျပါနော်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်က ရွှေလီရောက်နေတယ်
ဖောဂိုင်း ခ မျိုးကို
Ma Ma says: မနိုစာရင်း ရှင်းလှတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ပိတ်ရက် လာယူပါ့မယ်။
ငုရင်ထရန် ဟုရန်မေ ရဲ့ ကိုကိုး says: တစ်ရွက်ချင်း ဝယ်လို့ရပါသလားခမျာ
သျှားသက်မာန် says: ဘာပြက္ခဒိန်လဲဟင်…..သိချင်ပါတယ်
Shwe Ei says: -အနော် ၂ခုယူမယ်လေ..မနိုဆီလာယူရမလား ??
Novy says: ဟုတ်ပါတယ်၇ှင့်
Novy says: လက်ကျန် = ၉၁
Mike says: .တာဝန်ကျေပြီး..ဟီးဟီးဟီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: စောရိုးမဟုတ်… ဆောရိုး … အင်မတန်သနားစရာကောင်း နာကျင်ကြေကွဲနေတဲ့ စိတ်ကိုကိုယ်စားပြုတာ ..ရွာရဲ့ ရုပ်အဖြောင့်ဆုံးကောင်လေးနာမည်မှမှားရတယ်လို့ ……အဟိဟိဟိ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘယ် လို ဆောစော
အြော် ရိုးးသားးသူ ကချင်လေးး လို့ ပေါဒါဘာာာာ…
padonmar says: Alin Cho က ၁ခုလိုချင်လို့တဲ့ ။ရသေးလား။